Articles Published in November, 2016 | Sagal Radio Services
Articles Published in November, 2016
Xukuumadda Itoobiya oo xabsiyada ka sii daysay Kumanaan qof oo dhawaan xabsiga loo Taxaabay
Sagal Radio Services • News Report • November 1, 2016
Xoogagga Amniga Itoobiya ayaa xabsiga kasii daayay illaa 2,000 oo qof oo Todobaadyadii la soo dhaafay la xiray, sida ay baahisay Warbaahinta Fana oo xiriir la leh Xukuumadda Itoobiya.
Faransiiska oo sheegtay inuu la baxayo Ciidanka kaga Sugan Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika
Dowladda Faransiiska, ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay kala baxayso Jamhuuriyadda Afrika Dhexe, kaddib markii ay sheegtay in hawl-galkii ay ka wadday dalkaas lasoo gaba-gabeeyay Manta oo Isniin ah.
Safiirka Kenya ee Mareykanka oo sheegay inaan khasab lagu xirayn xeryaha Dhadhaab (Sawirro)
Danjiraha Kenya u fadhiya Magaalada Washington ee Dalka Mareykanka, Robinson Njeru Githae oo kulan la qaatay Qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan magaalada Atlanta ee gobolka Georgia, ayaa sheegay in Dowladda Kenya aysan damacsaneyn inay si khasab ah ku xirto Xeryaha Qaxootiga Dhadhaab oo ay ku nool yihiin qoxooti tiro badan oo Soomaali ah.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya oo xil ka qaadis ku sameeyay Wasiirka A. Dibadda iyo wasiiro kale
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Hailemariam Desalegn ayaa shaqada ka eryay xubno muhiim oo aad ugu dhowaa, kuwaasoo ay ku jiraan Wasiirada Arrimaha Dibadda iyo Maaliyada Xukuumadda Itoobiya.
Xiisad colaadeed oo ka taagan duleedka magaalada Baydhabo
uluf colaadeed oo ay wadaan ciidamada dowlada Soomaaliya iyo kuwa midowga Africa ee AMISOM ayaa ka taagan duleedka magaalada Baydhabo ee goboka Baay.
Akhriso: War Murtiyeed laga soo saaray heshiis ay gaareen Maamulada Galmudug iyo Puntland
Maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa heshiis hordhac ku gaaray magaalada Abu Dubai iyadoo heshiiskaasna ay goobjoog ka ahaayeen madaxda maamul goboleedyada kale ee dalka.
Dowlada oo caalamka kala hadleysa sidii Baasaboorka Soomaaliya loogu safri lahaa
Taliyaha waaxda socdaalka iyo jinsidiyada dowlada Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi ayaa ka hadlay qaadashada baasaboorka Soomaaliya iyo dadaalka dowlada ugu jirto sidii caalamka loogu safri lahaa baasaboorka Soomaaliga.
Is bar bar dhiga Turkiga iyo Imaaraadka Carabta, keebaa dan u ah shacabka Soomaaliyeed ?
Sagal Radio Services • News Report • November 3, 2016
Soomaaliya waa dal ku yaala bariga qaaradda Afrika, si gaar ah cirifka geeska qaaradda, waana dal uu Allah ku maneystay kheyraad kala duwan oo caalamka indhaha ay la raacayaan.
Mid kamid ah qoyska Boqortoyada Sacudi Carabiya oo xukun karbaash ah lagu fuliyay
Amiir ka mid ah boqortoyada Sacudi Carabiya ayaa lagu dhex karbaashay xabsi ku yaal magaalada Jiddah kadib markii ay maxkamad xukuntay bil ka yar markii la xukun qisaas ah lagu fuliyay amiir kale.